Abenzi be-duffel abangamanzi abavelisi kunye nababoneleli - i-duffel yebhegi yokungena manzi yeFektri
Ukuhamba ngaphandle kweNgxowa yeDuffel engenaManzi
Ingxowa yokuhamba yangaphandle enemisebenzi emininzi. Izinto ezikumgangatho ophezulu ze-PVC, umthamo omkhulu weelitha ezingama-65. Ilungele iimeko ezahlukeneyo. Nokuba uhamba ngaphandle, uqeqesho kwinkundla yevolibholi, uqubha kwindawo yokubhukuda, okanye ujima umthambo. Le ngxowa iya kuba ngumncedi wakho olungileyo.
Ulwenziwo bag enkulu-umthamo omkhulu
Umntu ohamba naye, onesitayile kwaye olula, vele uhambe. Umgangatho ophezulu wezinto ze-TPU ezingangenwa ngamanzi, ezinxibayo kunye nezokungangeni manzi. Indawo yokugcina i-55L enkulu, nokuba uyahamba, ukomelela komzimba, okanye uqeqesho kufanelekile. Kulula ukuphatha kwaye kulula ukuyisebenzisa.
UkuQeqesha okuQinisekayo kokuHamba kweNgxowa yeDuffel yesiqhelo
Ingxowa ye-duffel engenamanzi ene-500D-PVC kunye ne-70L enkulu. Ungayisebenzisa ekuhambeni, ukomelela, uqeqesho, ukuqubha kunye nezinye izihlandlo. Uncedo lwayo kunye nokumelana namanzi kuya kukuzisela isimanga esikhulu.